Akwụkwọ nke Mike Cunsolo na Martech Zone |
Edemede site na Mike Cunsolo
Mike Cunsolo bụ CMO nke CDNify, Nweta nnyefe ọdịnaya nke na-eme ka ọ dị mfe ịnweta CDN na-arụ ọrụ.
Anyị niile agaala ebe ahụ. Na-adọgbu onwe gị n'ọrụ na mgbasa ozi ahịa nke onye ahịa gị, na-eme ọtụtụ awa na ọtụtụ ọrụ dị ka ndị kachasị mma. Gbalị ike gị niile ijide n’aka na ihe niile dị, ka ihe wee na-aga were were were dịka ị nwere ike ibi ndụ. Agam ebe ahu ma amataghi m awa ole m jiri juo oso dika onye ara. Ma obi ụtọ bụ nnukwu akụkụ nke ihe kpatara ya